Nominate an Artist - McKnight Foundation
Magacaabista waxaa lagu soo dhaweynayaa Abaalmarinta Muusigga ee McKnight oo ka bilaabanaya Janaayo 11 ilaa Maarso 31, 2019. Magacaabista 2019 ayaa hadda furan.
Abaalmarinta sanadka ee McKnight Qiimaha Farshaxanka wuxuu aqoonsanayaa farshaxanada oo sameeyay dadaal dheeraada oo ku aaddan abuurista farshaxanka oo ah gudaha, degaanka, iyo / ama qaran ahaan muhiim ah. Farshaxanadani waxay doorteen in ay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigtaan Minnesota, taas oo ka dhigeysa in gobolkayaga meel hodan ku ah dhaqanka. Marka ugu horeysa, waxay sameeyeen farshaxan abuur leh oo muuqda oo muujinaya aragtidooda gaarka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn. McKnight Cayaartoyda Farshaxanka ah ayaa sidoo kale dhiirrigeliyey farshaxanno yaryar, iyagoo soo jiidanaya dhagaystayaasha, macaamiisha, naqshadayaasha, iyo xirfadlayaasha kale ee farshaxanka, qaarna waxay aasaaseen oo ay xoojiyeen ururada farshaxanka. (Fiiri sawirada la soo dhaafay).
Machadka McKnight wuxuu ku martiqaaday magacaabista aqoonsashada farshaxanno dheraad ah oo la yaqaan, kuwaas oo noloshooda farshaxan-abuurka lagu tilmaami karo mid aan caadi ahayn, iftiin, dhiirigelin, isfahmid, hal-abuur leh, hal abuur leh, oo si cad u muujinaya, iyo kuwa kale.
Nomines waa in ay xirfad farshaxan ah ku sameysay Minnesota.
Nomines waxay horay u soo martay guulo aan caadi ahayn, abaal-marinno, iyo ku-guuleysi ay ka samaysteen aaladooda farshaxanka.
Nomines ayaa laga yaabaa in ay ka shaqeeyaan mihnad farshaxan ama anshax.
Abaalmarinta Farshaxan ee Muhiimka ah wuxuu tagaa hal fanaaniin Minnesota sanad walba. Abaalmarintu waa $ 50,000. Cod-bixiyayaashu way furan yihiin.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad soo bandhigto farshaxaad buuxisa shuruudaha xaq u yeelashada, fadlan buuxi foomka hoose. Fadlan ha abuurin ololeyaal taageero ah hal fanaan. Ma kordhin doonto suurtogalnimada shakhsi ahaaneed ee ku guuleysta in lagu magacaabo dhowr jeer. Qofna ma heli karo abaalmarinta wax ka badan hal mar. Lama abaal-marin doono abaal-marin dambe.
Nidaamka dib u eegista
Gudiga dooranaya qofka qaata wuxuu ka kooban yahay shan qof oo si fiican u yaqaan jaaliyada farshaxan ee Minnesota. Gudigu wuxuu dib u eegi doonaa magacaabidda wuxuuna dooran doonaa hal naqshadeeye oo ah sanadka 2019. Guddiga ma aqbalayo warqadaha taageerada ama qalabka ololaha kale. Shaqaalaha ayaa ka saari doona tixgelinta kuwa loo magacaabay ee aan buuxin shuruudaha u-qalmitaanka.